Ukuqasha: Igama elithi "P" | Martech Zone
Abathengisi abakhulu bayakujabulela ukukhuluma ngakho Buyisela ku-Investment. Izolo, ngiye emhlanganweni nenkampani yezezakhiwo ebinezinselelo ezithile ngecebo labo lewebhu. Isiza sabo sezincwajana besingashayeli imikhondo eminingi kakhulu futhi bebesebenzisa imali ethe xaxa ezinhlelweni eziningi zangaphandle ukushayela ukuholela kumngcele wabo wokuthengisa. Inkinga esiyitholile ukuthi bebekhokhela zonke lezo zinkampani ukuze zincintisane nazo online.
Ukushayela emuva emuva kusuka kunani labo lokuhola lokuhola kanye nemali engenayo ngasondele, sisize ukubona ngeso lengqondo ukuthi luhlobo luni lomthelela isu lokumaketha eliku-inthanethi lilonke elingenza ukushayela izindleko ngokuhola phansi, ukukhulisa inani lemikhombandlela, nokunciphisa ukuncika kwabo kubantu besithathu. Akuyona inqubo yobusuku obubodwa - idinga umfutho necebo lesikhathi eside ukwenza ushintsho. Lokho kubukeka kuyinselelo ngezinkampani eziyimilutha yemithombo yokuhola evela eceleni.
Bajabule kakhulu ngomhlangano futhi kungekudala sizolandela izinyathelo ezilandelayo. Njengoba bengikhuluma nekholeji ngakho, noma kunjalo, angikwazanga ukuzibamba ngicabanga ukuthi yonke le nkulumo yokutshalwa kwemali, ibuyisela kutshalo-mali, izindleko zokumaketha, izindleko zokukhangisa… konke kususelwa kucebo elilodwa. Ukuze uthuthukise isabelomali sokumaketha, kufanele ukhulise inzuzo yenkampani.
Kamuva, ngangifunda engxoxweni yezenhlalo ukuthi izinkampani zikhathalela kanjani kuphela inzuzo. Angivumelani nhlobo. Izinkampani ezingama-99% esisebenze nazo - kusuka ezinkampanini ezinkulu zomphakathi kuya ekuqaleni okuncane kakhulu - inzuzo elinganisiwe kepha bekungajwayelekile isilinganiso sazo sempumelelo. Eqinisweni, ukutholwa kwamakhasimende, ukugcinwa kwamakhasimende, inzuzo yabasebenzi, igunya, ukwethenjwa, kanye nesabelo semakethe bekulokhu kuphezulu kakhulu ku-radar njengoba sikhulume ngokusiza izinkampani. Ngokweqiniso angikaze ngibe nenkampani eza kimi isho lokho sidinga ukukhulisa inzuzo - ungasiza kanjani?
Lokho kusho ukuthi, kuyacasula ukuthi igama elithi “P” seliphenduke elokuhlebelwa kunokumemeza lisentabeni ephakeme kakhulu. Inzuzo ayifani nokuhaha. Izinzuzo yizo ezenza izinkampani zikwazi ukuqasha, zinike izinkampani amandla okukhula, zenze izinkampani zikwazi ukutshala imali ocwaningweni nasekuthuthukisweni, futhi - ekugcineni - inzuzo yilokho izinkampani ezikhokhiswa intela kukho. Ngamanye amagama, uma umkhawulo wenzuzo uphakama kakhulu enkampanini, kungcono ngomnotho wethu jikelele. Inzuzo ephezulu ikhiqiza imali ephezulu yentela ukuxhasa izakhamizi zethu ezihluphekayo. Inzuzo ephezulu inika amandla izinkampani ezinjengezami ukuthi zikhule futhi zinike ithuba lokuthuthuka nokuqashwa kwalabo abafuna umsebenzi noma abafuna ukuthuthuka.
Ukuhaha kulapho izinkampani zixaka ingcebo bese zilimaza abasebenzi bazo, amakhasimende kanye nomphakathi. Izinkampani ezinenzuzo enkulu engizaziyo zikhokhela abasebenzi bazo kahle, ziyaqhubeka nokwenza ngcono ulwazi kumakhasimende abo, futhi zitshale imali futhi zinikele kakhulu emphakathini. Futhi bakwenza ngokuqongelela ingcebo ngokuzithandela, bengayithathi.
Angicabangi ukuthi kufanele sithule mayelana nokumaketha kanye nomthelela wakho enzuzweni. Ngicabanga ukuthi kufanele sigubhe inzuzo… kukhulu, kuba ngcono. Futhi akufanele ngabe sifuna izindlela zokuyinciphisa ngentela nomthethonqubo. Kuyaphikisana.
Nakhu ukukhulisa inzuzo yakho nemikhawulo yenzuzo yakho!
Tags: izindleko zokukhangisaizinkampaniukuhahaukutshalwa kwezimalimarketingizindleko zokukhangisainzuzobuyela kutshalomali
Amaqhinga Wokumaketha Okuqukethwe we-B13B adume kakhulu ama-2